I-Corn porridge yesifo sikashukela: kungenzeka ukuthi uyidle ngesifo sikashukela sohlobo 2 > Ukudla ngesifo sikashukela
Ukudla kwesifo sikashukela sohlobo 2: okusanhlamvu okuphelele nommbila, ilayisi
Okusanhlamvu okusobala okusobala akukuhle kuphela, kodwa futhi kusebenza kakhulu, ngoba aqukethe amavithamini amaningi: C, E, K, D, PP, kanye namavithamini e-B, i-magnesium, i-potassium ne-phosphorus. Ukudla ummbila kwehlisa amathuba okuba nesifo sikashukela, isifo senhliziyo kanye nesifo sohlangothi. Kuyaphawuleka ukuthi kunomthelela omuhle kuma-metabolism futhi kusiza ukwehlisa amazinga kashukela egazini.
Izithelo zommbila zihle kakhulu ukulungiselela izitsha ezahlukahlukene: okusanhlamvu, i-mamalyga, isobho, i-casseroles, i-baking toppings. Ikhiqizwa ngokusebenza ngokukhethekile okusanhlamvu okusanhlamvu. Izinhlobo ezilandelayo zokusanhlamvu ziyatholakala:
okugqwetshiwe - kunamasayizi ahlukahlukene nosayizi bezithelo,
ezinkulu - ezisetshenziselwa ukwenza okusanhlamvu nezinhlamvu zomoya,
ocolekileyo (ufulawa) - izinti ze-crispy zenziwa kusuka kulo.
Isitsha esithandwa kakhulu yi-mamalyga kusuka kummbila. Lapho sekwande ukwanda, ngenxa yokuthi amaTurkey awazange afune inkokhiso yalokhu, futhi yayingumyalo we-tastier obukhulu futhi onama-caloric angaphezu kwama-mamalyga avela amabele. E-Italy, lesi sidlo sabizwa nge- "polenta".
Konke Mayelana Nesifo Sikashukela
Iziguli eziningi zinentshisekelo yokuthi kungenzeka yini ukudla ummbila obilisiwe onesifo sikashukela sohlobo 2. Odokotela bakholelwa ukuthi umkhiqizo onjalo ulusizo impela, ngakho bayakuvumela ukuba bawusebenze.
Udinga ukukhetha izindlebe ezincane, ngoba ziqukethe izakhamzimba eziningi, uma ziqhathaniswa nommbila ovuthiwe. Udinga ukupheka emanzini, mhlawumbe ngaphandle kosawoti wethebula, kuze kube kuphekwe ngokuphelele, futhi ungadli izindlebe zombili ngaphezulu kwezimbili ngosuku.
Akukho lutho oluzuzayo kusuka kummbila okheniwe; ayiqukethe ngaphezu kwe-20% yezinto ezilusizo ezivela kuzinkomba zokuqala. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo enjalo ivame ukulekelelwa ushukela, okulondoloziwe kanye nokunambitheka, okunciphisa izinzuzo kaningana.
Kodwa-ke, ngesinye isikhathi imbila ekheniwe ingabiza, ngokwesibonelo, engeza izipuni ezimbalwa esitsheni sokuqala, noma isaladi.
Ufulawa wombila unenzuzo ethile kushukela, equkethe amaphuzu alandelayo:
Ngenxa yobuchwepheshe obukhethekile bokucubungula, ufulawa ugcina zonke izithako ezisebenzisekayo.
Ukusuka kufulawa, ungapheka izitsha ezahlukahlukene ezikuvumela ukuthi uguqule ukudla futhi uzuze umzimba - ama-pancake, ophaya, ama-pancake njalonjalo.
Ngenxa kafulawa, ungabhaka izinto ezibhakiwe ezi-khekhe, okungeke kube okumnandi kuphela, kepha futhi okunempilo.
I-Endocrinologists ithi iphalishi yommbila icishe ibe ipanacea yesifo sikashukela. Njengoba kusiza ukunciphisa inani le-cholesterol embi, ingumhlinzeki we-folic acid, iqinisa amathambo, inikeze umsebenzi wezinso ophuculwe kushukela likashukela, futhi kunciphisa ukuthuthukiswa kwe-pathologies ehambisanayo yohlelo lwezinhliziyo.
Kwezinye izinhlobo, inkomba ye-glycemic kafulawa kakhukhunathi iphansi kakhulu kunokuba, ngokwesibonelo, ukolweni noma ummbila. Unenani eliphakeme nokudla.
Inkomba ye-glycemic kafulawa welayisi iphezulu impela - amayunithi angama-95. Kungakho kunqatshelwe ngokuphelele kubantu abanesifo sikashukela nokukhuluphala.
Kepha inkomba ye-glycemic kafulawa esetshenzisiwe iphansi, okukhombisa ubukhona ekwakhekeni kwezinto ezinzima zokugaya. Ochwepheshe abaningi batusa abantu abane-carbohydrate metabolism disorder ukuthi bayifaka ekudleni kwabo kwansuku zonke.
Inkomba ye-glycemic kafulawa wezinhlobo ezahlukahlukene
Ochwepheshe bakhetha ukudla kweziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2, ngenkathi zibheka inkomba ye-glycemic (GI) yazo zonke imikhiqizo.
Le nkomba ikhombisa ukuthi ushukela uphuka ngokushesha kangakanani egazini ngemuva kokudla izithelo noma amaswidi.
Odokotela bazisa iziguli zabo ngokudla okujwayelekile, kuyilapho belahlekelwa amaphuzu athile abalulekile. Ngalesi sifo, udinga kuphela ukudla ukudla okunenkomba ephansi.
Bambalwa abantu abazi ukuthi ufulawa weziguli onemithambo ye-carbohydrate metabolism kufanele ube nalesi sikhombisi, ungeqi ngamashumi amahlanu. Ufulawa wokusanhlamvu ophelele onamadijithi afinyelela kumayunithi ayisithupha nesishiyagalolunye angaba ekudleni kwansuku zonke njengokuphela komthetho. Kepha ukudla okunenkomba engaphezulu kwamashumi ayisikhombisa akuvunyelwe ngokuphelele kwabanesifo sikashukela.
Ngokuvamile, ummbila ungadliwa kuzo zombili izinhlobo zalesi sifo, kodwa ngesifo sikashukela sohlobo 2, kufanele unake iqiniso lokuthi inkomba ye-glycemic yekhekhe iyahlukahluka ngokuya ngezici ezilandelayo:
izindlela zokulungisa ummbila,
inhlanganisela neminye imikhiqizo engezwe esitsheni.
Uma ummbila ungalungiselelwe kahle noma uhlanganiswa nezinye izithako, inkomba yawo ye-glycemic iyenyuka. Ngokuvumelana nalokho, ukusetshenziswa komkhiqizo kugcwele ukugxuma okubukhali kushukela wegazi.
Kwabanesifo sikashukela, inkomba ye-glycemic efanele yemikhiqizo isebangeni ukusuka ku-5 kuye ku-50. Ngakho-ke, kufanelekile ukunaka ukuthi ihluka kanjani ngokuya ngohlobo lokucubungula okusanhlamvu okusanhlamvu
inkomba ephansi ye-glycemic ye-cornmeal porridge (mamalyge) - kuze kube ngu-42,
okusanhlamvu okuqoshiwe kunesilinganiso esiphakeme sama-59,
iphakeme kakhulu kummbila obilisiwe - 70,
ocija osongelweni lokuxhuma ushukela yizimpawu zommbila - inkomba yazo ye-glycemic ingama-85.
Ake sibhekisise ukuthi abantu abanesifo sikashukela basebenzisa kanjani imikhiqizo yommbila ukuze bangezi ukukhuphula ushukela wegazi.
Abantu abaningi bathanda ukuvula umganu wommbila obanzi futhi bawusebenzise njengesitsha esisehlangothini noma isaladi. Esikhathini sikashukela, le ndlela iyemukeleka, kepha kuphela uma umbandela ongezwe usawoti noshukela ngenkathi ulondoloziwe uzoba mincane. Akufanele ugxile kakhulu kummbila wekheniwe, ngoba cishe i-20% yezinto ezilusizo zihlala zikuwo, futhi i-appetizer enjalo ngeke ilethe inzuzo ekhethekile.
Ungangeza okusanhlamvu okukheniwe kusaladi yemifino emisha ephansi ye-carb efana neklabishi, ukhukhamba, utamatisi, i-zucchini, nemifino ehlukahlukene. Isaladi ingafakwa ngokugqoka okunamafutha aphansi. Kuzoba ukwengeza okuhle enyameni edliwayo - isifuba, umlenze wenkukhu noma usawoti onamafutha aphansi we-veal (konke kunemeyile).
Imicu emincane evala izindlebe isetshenziswa ngenkuthalo emithini yesintu ukulwa nesifo sikashukela. Ukukhishwa kwalawa ma-stigmas kunezakhiwo ze-choleretic, kunciphisa ukuvela kwe-bile futhi kukwenyuse ukuqina kwegazi.
Ukulungiselela umhluzi ophulukisayo, udinga ukuthatha inhlamba kusuka ezindlebeni ezintathu zommbila. Izinwele zigezwa kahle emanzini agobhozayo futhi zithululelwa ngamanzi abilayo.
Ngemuva kwalokho kufanele babiliswe ikota yehora. Umhluzi usupholile, uhlungiwe futhi uthathwe izikhathi ezi-3-4 ngosuku ngaphambi kokudla.
Ngemuva kwesonto lokuphuza lo muthi, kufanele uthathe ikhefu - ungasiphathi isikhathi esifanayo. Ngemuva kwalokho umjikelezo uyaphinda.
Kubalulekile ukuthi ukuhlangana phakathi kwemithamo kufane - lokhu kuqinisekisa umphumela omuhle wokwelashwa. Izinga le-glucose lizojwayelekile futhi lizinzile kahle.
Kuyiqiniso, iphalishi yommbila kushukela akuyona i-panacea, kepha ukusetshenziswa kwayo okulinganiselayo, okulandela ubuchwepheshe bokulungiselela, kuyasiza ekugcineni amazinga kashukela egazi asezingeni elijwayelekile kuzo zombili izinhlobo zesifo sikashukela. Kuyadingeka kuphela ukuthi ubheke inkomba ye-glycemic yemikhiqizo ehlukahlukene eyenziwe ngommbila, zama ukungazihlanganisi namafutha bese ubheka ubukhulu besabelo.
Inkomba ye-Glycemic yamabanga ahlukene kafulawa
I-Flour yesifo sikashukela, njenganoma yikuphi okunye ukudla neziphuzo, kufanele kube nenkomba ye-glycemic yama-unit angama-50 - lokhu kuthathwa njengesinkomba esiphansi. Ufulawa wokusanhlamvu okuphelele onenkomba efinyelela kumayunithi angama-69 angafakiwe angabakhona kwimenyu kuphela. Imikhiqizo yokudla enenkomba yamayunithi angaphezu kwama-70 ayenqatshelwe ngokuphelele abanesifo sikashukela, ngoba ikhuthaza ukwanda okukhulu kokuxineka kweglucose egazini, ikhulisa ubungozi bezinkinga ngisho ne-hyperglycemia.
Kunezinhlobo ezimbalwa zikafulawa okubhakwa kuzo imikhiqizo kafulawa yeshukela. Ngokungeziwe ku-GI, kufanele unake okuqukethwe yi-calorie yayo. Ngempela, ukusetshenziswa ngokweqile kwekhalori kuthembisa iziguli ukubhekana nokukhuluphala, futhi lokhu kuyingozi enkulu kubanikazi besifo "esimnandi". Ngohlobo 2 sikashukela, kubalulekile ukukhetha ufulawa we-GI ophansi ukuze unze lesi sifo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukunambitheka okuzayo kwemikhiqizo kafulawa kuya ngezinhlobo zikafulawa. Ngakho-ke, ufulawa kakhukhunathi uzokwenza imikhiqizo ebhakwe ibe yinhle futhi ilula, ufulawa we-amaranth uzoheha abathandekayo nabathandekayo abangaphandle, futhi kusuka kufulawa we-oat awukwazi nje ukubhaka, kodwa futhi upheke ujeli ngesisekelo sawo.
Ngezansi ufulawa wezinhlobo ezahlukahlukene, onenkomba ephansi:
i-oatmeal iqukethe amayunithi angama-45,
ufulawa we-buckwheat uqukethe amayunithi angama-50,
ufulawa wefilakisi uqukethe amayunithi angama-35,
i-amaranth ufulawa uqukethe amayunithi angama-45,
ufulawa we-soy uqukethe amayunithi angama-50,
Inkomba ye-glycemic kafulawa wokusanhlamvu okuphelele izoba amayunithi angama-55,
ufulawa opelwe uqukethe amayunithi angama-35,
ufulawa we-coke uqukethe amayunithi angama-45.
Le ufulawa kashukela uvunyelwe ukusetshenziswa njalo ekuphekeni.
Ukubhaka akuvunyelwe emabangeni alandelayo kafulawa:
ummbila uqukethe amayunithi angama-70,
ufulawa kakolweni uqukethe amayunithi angama-75,
ufulawa webhali uqukethe amayunithi angama-60,
ufulawa welayisi uqukethe amayunithi angama-70.
Kwenqatshelwe ngokuphelele ukupheka i-muffin kusuka kufulawa we-oat webanga eliphakeme kakhulu.
Amamaki ayi-8 amahle kakhulu
Kunezinhlobo eziningi zikafulawa ezingasetshenziswa ekuphekeni imikhiqizo kafulawa yeshukela, ngoba inokuqukethwe kwekhalori okuphelele, futhi okubaluleke kakhulu - inkomba ye-glycemic index (GI) ephansi, okungukuthi, kuze kube ngama-50-55 amayunithi. Lezi zinhlobo zikafulawa zingatholakala ngezansi.
I-GI kafulawa onjalo emikhawulweni ephansi iyunithi engama-35, futhi inani lekhalori nge-100 g ngu-270 kcal. Kwenziwa ngokugaya imbewu yefilakisi. Ingathengwa eyenziwe ngomumo noma ugaye ngokwakho. Umehluko ukuthi ufulawa wesitolo wenziwa ngemuva kokuthi amafutha e-flaxseed acindezelwe kusuka ezinhlanyelweni. Ngakho-ke, iba "eyomile" ngokwengeziwe futhi ingagcinwa isikhathi eside. Uma wenza ufulawa ovela ezinsolweni zefilakisi ngokwakho, kuzodingeka uwugcine esitsheni esivaliwe futhi isikhathi esifushane, futhi endaweni epholile.
Ufulawa we-flaxseed usetshenziswa njengesengezo ekubhakweni ngamanani amancane. Ngaphezu kwalokho, ingathathwa ngomlomo kwifomu elomile le-1 tsp. ukhezo izikhathi 3 ngosuku. Qiniseka ukuthi uphuza uketshezi oluningi.
Ufulawa we-flaxseed ulusizo kakhulu kushukela - uthuthukisa umetabolism, wehlisa ushukela wegazi kanye ne-cholesterol, futhi ugcoba umzimba ngamaminerali nangamavithamini. Ngaphezu kwalokho, iyi-antioxidant yemvelo enamandla egeza umzimba futhi ivimbele inqubo yokuguga.
Kwenziwa kusuka emhlabathini okusanhlamvu okugcwele kwama-oats noma ama-Hercules. Ine-GI ephansi - amayunithi angama-40, kepha okuqukethe ikhalori ephezulu - ama-369 kcal nge-g 100. Inothile ngamavithamini we-B namaminerali - i-potassium, i-magnesium ne-selenium. Kungasetshenziswa ufulawa ofanayo ukwenza amakhukhi e-oatmeal. Ngaphezu kwalokho, ixubene nezinye izinhlobo zikafulawa futhi ezisetshenziselwa ukubhaka.
Ngokwehlukana, kufanelekile ukuqaphela ukuthi i-oatmeal isiza ukunciphisa ukucwilisa ushukela egazini futhi isuse i-cholesterol embi emzimbeni. Ukuyisebenzisa njalo kusiza ukwehlisa umthamo we-insulin ye-hormone futhi kuqede nezinkinga ngepheshana lesisu.
Inani layo lekhalori lincane - alikho ngaphezu kwama-280 kcal, kanti i-GI amayunithi angama-40-45. Kulesi ufulawa, i-rye ne-Borodino isinkwa kuvame ukulungiswa kakhulu, okuthathwa njengokuwusizo kakhulu ngenxa yenani elikhulu le-fiber, i-carbohydrate ehamba kancane namavithamini.
Umuntu onesifo sikashukela angadla izingcezu ezi-3 zesinkwa rye ngosuku (kufika ku-80 g).
I-Flour ine-400 kcal nge-100 g ne-GI ephansi yamayunithi angama-45. Kukhiqizwa ngokugaya uginindela owomile nonamafutha wezithelo zesundu kakhukhunathi. Kuqukethe amavithamini B, E, D no-C, kanye namaminerali kanye namafutha acid.
Kusetshenziswa ufulawa kakhukhunathi ekuphekeni ama-pancake, ama-muffin, kuma-roll nakwezinye iziphuzo, ngoba kubenza bangaguquki. Ukugayeka kalula futhi kusiza umsebenzi wepheshana lesisu ngenxa yokugcwala komzimba ngefayibha ne-fiber yokudla.
1 Izinzuzo zokusanhlamvu kushukela
Izincomo ezi-2 zokukhethwa kokusanhlamvu nezinhlamvu
2.1 Iphalishi likakolweni
2.2 Iphalishi le-oatmeal ne-oatmeal
2.3 I-Millet porridge
2.4 I-Barley porridge neshukela
2.6 Izinsimbi zommbila
2.7 I-peas neshukela
3 Amanye amabele
Ukudla iphalishi ngesifo sikashukela kungenzeka futhi kuyadingeka: acebile ngamavithamini kanye nama-macroelements, anele kahle ama-carbohydrate, ngenxa yokuthi ukwanda ushukela wegazi kwenzeka kancane kancane. Ukulungiselela iphalishi kulula, kusetshenziswa njengesitsha esehlukile noma isitsha esisehlangothini. Izinhlamvu eziwusizo zesifo sikashukela: i-buckwheat, i-oatmeal, i-oatmeal, ukolweni kanye nebhali le-pearl. Ubisi lwe-porridge lulungiselelwe kangcono nge-skim noma ubisi lwe-soy.
Izinzuzo zokusanhlamvu kashukela
Isiraphu sikashukela siyingxenye ebalulekile yokudla. Izinto ezifakiwe ekwakheni kwazo ziqinisekisa ukuthuthuka okuvamile, ukukhula kanye nokusebenza kwazo zonke izitho zomzimba.
I-Croup ingumthombo wefayibha, ihlanza umzimba wobuthi, igcwalise umzimba futhi inciphise ukumuncwa kwama-carbohydrate. Kuqukethe ikakhulu ama-saccharides ayinkimbinkimbi, ukukala ushukela okushisayo. Izinhlamvu ezinhlobonhlobo ngamunye unezinkomba zazo zamavithamini nezakhi zomzimba, ngakho-ke ezinye zazo zingaphansi komkhawulo ekudleni. Uhlu lokudla okusanhlamvu okuvunyelwe luyatholakala kudokotela wakho.
Lapho ukhetha okusanhlamvu, abanesifo sikashukela kudingeka basusele kuzinkomba ezilandelayo:
inani lamavithamini kanye nefayibha.
I-Artek - izingcezu zikakolweni ezigotshwe kahle.
Izinhlobo ezi-2 zokudla okusanhlamvu zikhiqizwa okusanhlamvu kakolweni: IPoltava neArtek. Esokuqala sinemininingwane eminingi, esesibili sincane. I-Wheat porridge enoshukela singesinye sezitsha ezinempilo kakhulu. Ivimbela ukukhuluphala, ithuthukise i-mucosa yamathumbu, isuse i-cholesterol kanye nobuthi. Ngenxa yama-pectins, izinqubo zokubola zihamba kancane, futhi i-fiber efakiwe ekwakhiweni inomphumela omuhle esizalweni. I-GI yamafutha kakolweni angama-45.
Ngaphambi kokupheka, okusanhlamvu okuncane akukwazi ukugeza.
Ukuze ulungiselele isidlo, uthele 1 inkomishi kashukela nezinkomishi ezimbili zamanzi, ulethe ku-thumba.
Igwebu elingcolile elinodoti olwakhiwe ngaphezulu luyasuswa.
Ngemuva kokubilisa, umlilo uyancipha bese ubiliswa imizuzu engaba ngu-20 kuze kube yilapho uketshezi luphuma ngokuphelele.
Lapho iphalishi selilungile, kunconywa ukusonga ipani imizuzu engu-5-7 ngethawula.
Amafutha omnqumo noma zemifino asetshenziswa njengokugqoka kwesifo sikashukela.
I-oatmeal ne-oatmeal porridge
Ngaphezu kwe-fiber enempilo namavithamini, i-oatmeal iqukethe i-analogue esekwe esitshalweni ye-insulin. Ushukela ophezulu wegazi, kunconywa ukuthi udle i-oatmeal kanye ne-cereal. Lokhu okusanhlamvu kuthuthukisa i-microflora yamathumbu, kuvumele umgudu wokugaya ukudla nesibindi, kuqinise ukusebenza kwe-lipids nama-carbohydrate. I-Oatmeal yesifo sikashukela ibilisiwe emanzini. Kuhamba kahle amajikijolo, amantongomane nezithelo zonyaka. Kungcono ukubangeza kumkhiqizo osuqediwe ukuze zonke izinto eziwusizo zigcinwe.
I-GI ye-oatmeal esheshayo iyunithi ezingama-66, ngakho-ke kuyodingeka uyenqabe.
Kwanele ukupheka ubisi lwe-oatmeal porridge 1 isikhathi ngeviki.
I-Hercules porridge ingama-oat flakes asebenze ukucutshungulwa okukhethekile. Kulula ukupheka esitofini esijwayelekile, kupheka ophansi futhi onamakha. Ubisi lwe-oatmeal porridge lungadliwa kanye njalo emavikini angama-1-2.Iwusizo kakhulu kushukela wohlobo 2:
kunciphisa "cholesterol embi"
iguqula isimo sohlelo lokuthinta kwenhliziyo,
kuthuthukisa umgudu wokugaya ukudla.
amavithamini K, E, C, B,
Yiba, Si, K, Zn, Mg.
I-Millet porridge isiza ukususa izinto ezinobuthi futhi iqinise nemisipha. I-GI amayunithi angama-45. Ungapheka emanzini, imifino noma umhluzi wenyama onamafutha. Uma isiguli sinesifo sikashukela sokukhulelwa, amabele kufanele aphekwe kuphela emanzini. Siqukethe:
Iresiphi ye-porridge yamanyolo
To millet porridge was crumbly, it is pre -gcwele ngamanzi, abilisiwe futhi akhanywa.
Kukhona uthuli namafutha okusanhlamvu, okuhlala ezinhlamvini futhi kunikeze isisi esinamathele ngesikhathi sokupheka. Ukuthola inguqulo evulekile, kubalulekile ukuthulula i-180 g yamabele ngenani elifanayo lamanzi futhi ulethe ngamathumba. Ngemuva kokuthela amanzi angcolile ngesihlungo, hlambulula ama-grey ngaphansi kwamanzi agobhozayo.
Buyisela okusanhlamvu epanini, usawoti, engeza izinkomishi ezimbili zamanzi. Faka ukushisa okuphakathi, ungambozi ngesembozo ngenkathi upheka.
Imizuzu eyi-10 ngemuva kokubilisa uthele isipuni samafutha omnqumo. Pheka kuze kuthambe.
Mboza, bopha ithawula bese ushiya ingxenye yehora.
I-Barley porridge neshukela
Ibhali le-Pearl lakhiwa okusanhlamvu okubhaliwe. Inkomba ye-glycemic ingamayunithi angama-22 kuphela, ngakho-ke ingadliwa cishe nsuku zonke njengesitsha saseceleni noma isidlo esigcwele. Iphalishi lebhali liqukethe:
amavithamini eqembu B, E, PP, njll.
Izinzuzo zokusebenzisa njalo:
ukubukeka kwesikhumba, izinzipho nezinwele kuyathuthuka,
izinqubo zokuguga ziyehla,
Ibhali akufanele lichitheke:
nesilonda esiswini nezinye izifo zesisu esiteji esibuhlungu,
ngesikhathi sokukhulelwa ngenxa yokukhuphuka kwefulethi.
Lapho usebenzisa isidlo se-buckwheat, kubalulekile ukulungisa isilinganiso se-insulin esikhishwe.
Iphalishi le-Buckwheat liqukethe i-rutin, ethuthukisa isimo sohlelo lwe-vascular system. Ngenxa yezinto ze-lipotropic, ingozi yokukhuluphala kwesibindi incishisiwe. I-Buckwheat ayikwazi ukupheka: kuvame ukubiliswa ubusuku ebusuku kuyi-thermos futhi ekuseni bavuselela ngesitsha esenziwe ngomumo. Inkomba ye-glycemic amayunithi angama-50, ngakho-ke, ngohlobo lwesifo sikashukela 1, ukulungiswa komthamo we-insulin kuyadingeka.
I-buckwheat eluhlaza okwesibhakabhaka iyathandwa. Lokhu okusanhlamvu akuzange kuphathwe ngokuphathwa kokushisa, ngakho-ke, ukwakheka kwayo kwagcina ubuningi bezici ezilusizo. Kwisifo sikashukela, amahlumela omile ayanconywa:
Hlambulula i-buckwheat eluhlaza ngaphansi kwamanzi agobhozayo, uthele amanzi abilayo afudumele emunweni ngenhla kweleveli yokusanhlamvu. Shiya amahora angama-5-6.
Thela amanzi, hlamba ama-groats ngaphansi kokugijima, bese upholile, uhlanze amanzi.
Thela amanzi, amboze okusanhlamvu ngethawula elimanzi noma ngebhandeji, amboze epanini ngesivalo.
Govuza futhi hlamba njalo ngamahora angama-5-6.
Ngemuva kwamahora angama-24, ungadla okusanhlamvu. Gcina esiqandisini.
I-Corn porridge yohlobo lwesifo sikashukela 2 idliwe ngamanani amancane: I-GI amayunithi angama-80. Uma isiguli sithanda kakhulu i-mamalyga, sivunyelwe ukungasebenzisi isikhathi esingaphezu kwesingu-1 ngeviki ekuseni. Izinhlamvu zommbila:
iqeda izinqubo ezibekezela emathunjini amancane,
kwandisa ukumelana namagciwane,
iguqula uhlelo lwangaphakathi lwezinzwa,
kuthuthukisa isimo sezinwele.
amavithamini: A, E, PP, B, njll,
macronutrients: P, Si, Ca, Fe, Cr, K.
Ngenxa ye-GI ephezulu, izinsimbi zommbila azikwazi ukuhlanganiswa nemikhiqizo yobisi, futhi usayizi wokukhonza akufanele wedlule amagremu ayi-100-150.
Ngalesi sifo, uphizi ungadliwa ngohlobo lwephalishi.
Ama-peas asencane kanye ne-pea groats anempilo ngokulinganayo. Ama-pods amasha aneprotheni amaningi, futhi izikhwebu ezomile ziqukethe:
Vitamin PP ne-B
I-peas ingadliwa noshukela ngendlela yamabele, izithasiselo kumasaladi zemifino kanye nasosobho. Ehlobo, ungenza isobho lokudla ngamapheya amancane. Uma usifuna ngempela isobho sethanga, kunconywa ukuyibilisa kumhluzi wemifino, bese ufaka inyama endishini eseqediwe. Ama-Crackers afakwa isinkwa se-rye.
Ukuze ungabangeli ukulimala okungadingekile, kunconywa:
lapho ukhetha ukudla, kufanele kube netafula le-glycemic indices yemikhiqizo edumile eseduze,
yenza iphalishi yobisi usebenzisa ubisi lwe-soya,
awukwazi ukufaka ufulawa ku-gravy - lokhu kwandisa i-GI,
Sebenzisa iphalishi ye-wholemeal.
Akuzona zonke izinhlamvu ezinesifo sikashukela ezingadliwa. Ilayisi elimhlophe elicwengekile linenkomba ephezulu ye-glycemic, ngakho-ke uma ufuna i-risotto noma i-pilaf, kunconywa ukukhetha uhlobo olunsundu, olunhlobonhlobo wasendle noma i-basmati. Kufanelekile futhi ukunaka i-rayisi bran: i-GI yabo ayidluli amayunithi angama-18-20. Isifo sikashukela esincike ku-insulin, kuzofanela ulungise umthamo we-insulin ngemuva kokudla ipuleti le-porridge yakho oyithandayo. I-GI semolina - amayunithi angama-82, ngakho-ke onesifo sikashukela mayelana ne-semolina kungcono ukukhohlwa. Ziba ngokushesha fatten, calcium ukuntuleka. Ngokuphazamiseka kwe-metabolic, ukuhlukunyezwa kwe-semolina kugcwele imiphumela. Kodwa iphalishi lebhali akudingi ukuthi lilinganiselwe: ngenxa yokugaya okuhlanganisiwe, izinto eziwusizo ziyagcinwa.
Minyaka yonke, inani leziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-non-insulin -xhomekeki luyakhula. Ukusolwa kukungondleki kahle kanye nendlela yokuphila engenzi lutho. Lapho umuntu ezwa lokhu kuthola okudumazayo, into yokuqala efika engqondweni ukudla okuyisimanga okungenawo amaswidi. Kodwa-ke, le nkolelo ayilungile, gcina uhlu lokudla okwamukelekayo neziphuzo kunabile.
Ukubambelela ekwelashweni kokudla kuyindlela yokuqala yokwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2, nokwelashwa okufana okunciphisa ubungozi bezinkinga zesifo sikashukela sohlobo 1. Ukudla kufanele kube nokulinganisela, futhi kuqukethe ama-carbohydrate enzima kuphela, ukuze ukugxila egazini kungaphakathi kwemingcele evamile.
Ama-endocrinologists akhetha ukudla kohlobo lweshukela sikashukela 2 kususelwa kwinkomba ye-glycemic index (GI) yemikhiqizo. Le nkomba ikhombisa ijubane lapho ushukela ongena egazini ehla khona ngemuva kokudla umkhiqizo othile. Odokotela bavame ukutshela iziguli ukudla okujwayelekile kakhulu etafuleni likashukela, balahle amaphuzu abalulekile.
Le ndatshana izogxila ekutsheleni ukuthi yiluphi ufulawa ovunyelwe ukubhaka. Le mibuzo elandelayo kuxoxwa ngayo: hlobo luphi lwefulawa olungasetshenziselwa ushukela, ukuze lube nenkomba ephansi ye-glycemic, nokuthi amakhekhe ashukela aneswekile alungiswa kanjani.
Ufulawa we-oat ne-buckwheat
Ama-oats anenkomba ephansi, futhi kuwo kutholakala ufulawa wesifo sikashukela "ophephe kakhulu". Ngaphezu kwalokhu kufaka phakathi, i-oatmeal iqukethe into ekhethekile eyehlisa ukugcwala kweglucose egazini futhi isuse umzimba wekholesterol embi.
Noma kunjalo, lolu hlobo lwefulawa lunokuqukethwe kwekhalori ephezulu. Kunama-369 kcal ngegremu eyikhulu yomkhiqizo. Kulokhu, kunconywa ekwenziweni kwemikhiqizo kafulawa ukuxuba i-oatmeal, ngokwesibonelo, nge-amaranth, ngokunemba, i-oatmeal.
Ukuba khona kwama-oats ekudleni kuphumula umuntu ezinkingeni ngepheshana lesisu, ukuqunjelwa kuqedwe, nomthamo we-insulin ye-hormone nawo uyancishiswa. Le mpuphu inothile ngamaminerali amaningi - i-magnesium, potassium, selenium, kanye namavithamini e-B. Ukubhaka i-Oatmeal kuvunyelwe ngisho nakwimenyu yabantu abaye bahlinzwa.
Ufulawa we-Buckwheat ubuye nekhalori ephezulu, ama-353 kcal ngamagremu ayi-100 omkhiqizo. Ucebile ngamavithamini namaminerali amaningi, okuwukuthi:
Amavithamini e-B anethonya elenza uhlelo lwezinzwa, ukulala kangcono, imicabango yokukhathazeka ihambile,
I-nicotinic acid ithuthukisa ukuhamba kwegazi futhi ikhulule umzimba wokuba khona kwe-cholesterol embi,
isusa ubuthi nemithi esindayo,
ithusi ithuthukisa ukumelana komzimba ezifweni ezahlukahlukene kanye namagciwane,
amaminerali anjenge-manganese asiza indlala yegilo, i-glucose ejwayelekile,
i-zinc iqinisa izipikili nezinwele,
i-iron ivimbela ukukhula kwe-anemia, ikhuphula izinga le-hemoglobin,
ukuba khona kwe-folic acid kubaluleke kakhulu kwabesifazane abakhulelwe, le asidi ivimbela ukukhula okungajwayelekile kweshubhu le-neural le-fetus.
Kulokhu kulandela ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela se-mellitus zohlobo lokuqala nolwesibili zivunyelwe imikhiqizo kafulawa kusuka ku-buckwheat ne-oat ufulawa.
Into esemqoka ukungasebenzisi iqanda elingaphezu kwelilodwa ekubhaka, kodwa ukukhetha noma yiliphi i-sweetener (i-stevia, i-sorbitol) njenge-sweetener.
Ngeshwa, izimpahla eziphekiwe zommbila zivinjelwe abanesifo sikashukela, ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-GI nekhalori, i-331 kcal ngamagremu ayi-100 omkhiqizo. Kepha ngenkambo ejwayelekile yesifo, ama-endocrinologists avuma inani elincane lokubhaka elivela kulezi zinhlobonhlobo zikafulawa.
Konke lokhu kuchazwa kalula - ummbila uqukethe inani elikhulu lamavithamini namaminerali alusizo, angenzi eminye imikhiqizo yokudla. Le mpuphu inothile ku-fiber, ekhulula ukuqunjelwa futhi ithuthukise ukusebenza kwepheshana lesisu.
Isici esihlukile semikhiqizo yommbila ukuthi azilahli izinto zazo ezibalulekile ngesikhathi sokwelashwa okushisa. ICornmeal inqatshelwe ngokuphelele kubantu abanezifo zesisu, isifo sezinso esingamahlalakhona.
Umphumela ozuzisayo emzimbeni walolu hlobo lwefulawa:
Amavithamini e-B - anomthelela omuhle ohlelweni lwezinzwa, ukulala kuyathuthuka futhi umuzwa wokukhathazeka unyamalale,
I-fiber isetshenziselwa ukuvimba ukuqunjelwa,
kunciphisa ingozi yokuthola ama-neoplasms amabi,
ayiqukethe i-gluten, ngakho-ke kubhekwa njengofulawa ophansi we-allergenic,
ama-microelements afakiwe ekwakhiweni asiza ukususa i-cholesterol embi emzimbeni, ngaleyo ndlela ivimbele ukwakheka kwama-cholesterol plaque kanye nokuqhekeka kwemithambo yegazi.
Kukho konke lokhu kulandela ukuthi ufulawa wommbila uyigumbi lamavithamini namaminerali, okunzima kakhulu ukuwakha nezinye izinhlobo zikafulawa.
Kodwa-ke, ngenxa ye-GI ephezulu, le mpuphu ivinjelwe abantu abanesifo “esimnandi”.
Isikhathi eside, ukubhaka okwenziwe ekudleni kwenziwa kusuka kufulawa we-amaranth phesheya, okunciphisa ngisho nokugcwala kwe-glucose egazini. Lo mkhiqizo utholakala lapho imbewu yonke ye-amaranth ichotshozwa ibe yimpuphu. Okuqukethwe kwekhalori ngamagremu ayi-100 omkhiqizo kungama-290 kcal kuphela - lokhu kuyinkomba ephansi uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zikafulawa.
Lolu hlobo lwefulawa lubonakala ngokuqukethwe kwamaprotheni amaningi, ngamagremu ayi-100 okujwayelekile okwenziwa nsuku zonke komuntu omdala. Futhi i-calcium ku-amaranth ufulawa iphindwe kabili kunobisi lwenkomo. Futhi, ufulawa ugcwele i-lysine, esiza ekutholeni i-calcium ngokugcwele.
I-Amaranth kafulawa inconyelwa phesheya kubantu abanezifo ze-endocrine, ikakhulukazi uhlobo 1 nohlobo 2 sikashukela. Yehlisa ukumelana ne-insulin, isungula ukukhiqizwa kwama-hormone ngenani elidingwa ngumzimba.
Ufulawa we-Amaranth ucebile kulezi zinto ezilandelayo:
Futhi iqukethe amavithamini amaningi - ama-proitamin A, amavithamini eqembu B, uvithamini C, D, E, PP.
Ifilakisi nefulawa ye-rye
Ngakho-ke isinkwa sikashukela ekuphekeni kancane noma kuhhavini singalungiswa kusuka kufulawa wefilakisi, ngoba inkomba yayo iphansi, kanti okuqukethwe kwekhalori ngamagremu ayi-100 omkhiqizo kuzoba ngama-270 kcal kuphela. Ifilakisi uqobo alisetshenziswa lapho kulungiswa lefulawa, kuphela imbewu yayo.
Ukubhaka kusuka kulolu hlobo lwefulawa akunconyelwanga ushukela kuphela, kodwa futhi nokuba khona kwesisindo eseqile. Ngenxa yokuba khona kwefayibha ekwakhiweni kwayo, umsebenzi wepheshana lesisu usakhiwa, amandla esisu ashukunyiswa, izinkinga nge-stool ziyanyamalala.
Amaminerali afakiwe ekwakhiweni akhulula umzimba we-cholesterol embi, aqinise izicubu zenhliziyo kanye nesistimu yenhliziyo yonke. Ngaphezu kwalokho, ufulawa wefilakisi uthathwa njenge-antioxidant yemvelo enamandla - yehlisa ijubane inqubo yokuguga futhi isuse nemikhiqizo yempilo engxenye yomzimba.
Ufulawa weRye uvame ukusetshenziswa kakhulu ekulungiseleleni isinkwa sikashukela kweziguli. Lokhu akubangelwa ukutholakala kwayo ezitolo ezinkulu, intengo ephansi ne-GI yamayunithi angama-40, kodwa futhi ngenxa yokuqukethwe kwekhalori ephansi. Kunama-290 kcal ngamagremu ayi-100 womkhiqizo.
Ngokwesilinganiso se-fiber, i-rye ingaphambi kwebhali ne-nokunye okufana nokolweni, futhi ngokuqukethwe kwezinto ezibalulekile - ukolweni.
Ukudla kwefulawa ye-rye:
Ngakho-ke ukubhaka kusuka kufulawa we-rye kwabanesifo sikashukela kufanele kudliwe kaningana ngosuku, hhayi ngaphezu kwezintathu kathathu nsuku zonke (kufika ku-80 amagremu).
Kwividiyo ekulesi sihloko, kwethulwa izindlela eziningana zokubhaka kwesifo sikashukela.
Imiphi imithetho okufanele ilandelwe
Ngaphambi kokuthi ukubhaka kulungele, kufanele ucabangele imithetho ebalulekile ezosiza ukulungiselela isidlo esimnandi ngempela sabanesifo sikashukela, esizoba wusizo:
Sebenzisa ufulawa we-rye kuphela. Kuzoba kuhle kakhulu uma ukubhaka kwesigaba 2 sikashukela kuyi-grey ncamashi ebangeni eliphansi nokugaya okuhlanganayo - okunokuqukethwe kilojoule okuphansi,
ungahlanganisi inhlama namaqanda, kepha, ngasikhathi sinye, kuvunyelwe ukwengeza ukugoqa okuphekwe,
Musa ukusebenzisa ibhotela, kepha sebenzisa imargarine esikhundleni salokho. Akuyona into ejwayelekile kakhulu, kepha ngesilinganiso esiphansi samafutha, esizoba wusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela,
buyisela i-glucose esikhundleni soshukela. Uma sikhuluma ngabo, kungakuhle kakhulu ukusebenzisa imvelo, hhayi eyokuzenzisa, ngokwesigaba 2 sikashukela mellitus. Ngokukhethekile umkhiqizo wemvelo ezweni ngesikhathi sokushisa ukushisa ukuze wakhe ukwakheka kwawo ngendlela yawo yoqobo,
njengokugcwalisa, khetha kuphela leyo imifino nezithelo, izindlela zokuvumela lapho kuvunyelwe ukuthatha njengokudla kwabanesifo sikashukela,
kubaluleke kakhulu ukukhumbula izinga lokuqukethwe kwe-caloric yemikhiqizo kanye nenkomba yazo ye-glycemic, ngokwesibonelo, amarekhodi kufanele agcinwe. Kuzosiza okuningi ngesigaba 2 sikashukela
akunqweneleki ukuthi amakhekhe abe makhulu kakhulu. Ilungile kakhulu uma kuvela ukuthi ingumkhiqizo omncane ohambelana neyunithi eyodwa yesinkwa. Ukupheka okunjalo kungcono kakhulu kwisifo sikashukela sesigaba 2.
Ukugcina le mithetho elula engqondweni, kungenzeka ngokushesha futhi kalula ukulungiselela umuthi onambitheka ngokweqile ongenawo ama-contraindication futhi awubangeli izinkinga. Kuyinto zokupheka ezinjalo ukuthi baziswa ngempela ngamunye we-diabetes. Inketho enhle ukuthi ukubhaka kube ngamaqebelengwane kafulawa we-rye agxishwe amaqanda no-anyanisi oluhlaza, amakhowe othosiwe, ushizi we-tofu.
Ungayilungisa kanjani inhlama
Ukuze ulungiselele inhlama ebaluleke kakhulu kwisigaba 2 sikashukela i-mellitus, uzodinga ufulawa we-rye - ama-0.5 kilogalamu, imvubelo - amagremu ama-30, amanzi ahlanziwe - ama-milliliters angama-400, usawoti omncane kanye nezinzipuni ezimbili zamafutha sunflower. Ukwenza izindlela zokupheka zilunge ngangokunokwenzeka, kuzodingeka ukuthulula inani elifanayo lefulawa bese ubeka inhlama eqinile.
Ngemuva kwalokho, beka isitsha ngenhlama kuhhavini oshaqisiwe bese uqala ukulungiselela ukugcwaliswa. Amaphayi asevele abhakwe naye kuhhavini, osebenziseka kakhulu kwabanesifo sikashukela.
Ukwenza ikhekhe nekhekhe
Ngaphezu kwamaphayi wesifo sikashukela sesigaba 2, kungenzeka futhi ukulungiselela ikhekhe elinenjabulo nelokunisela ngomlomo. Ukupheka okunjalo, njengoba kuphawuliwe ngenhla, ungaphelelwa usizo.
Ngakho-ke, lapho usenza ikhekhe, kuzodingeka iqanda elilodwa, imargarine enokuqukethwe okuphansi kwama-gramu angama-55, ufulawa we-rye - izipuni ezine, i-zest zest, omisiwe, ne-sweetener.
Ukwenza i-khekhe linambitheke ngempela, kungakuhle ukuxuba iqanda ne-imajarini usebenzisa i-mixer, engeza isirinji esikhundleni sikashukela, kanye ne-zest zest kule ngxube.
Emva kwalokho, njengoba izindlela zisho, ufulawa nezomisiwe kufanele kufakwe engxenyeni, ewusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela. Ngemuva kwalokho, kuzodingeka ubeke inhlama kwifomu ebilungiselelwe ukupheka ngaphambili bese ubhaka kuhhavini ekushiseni okungama-degree angama-200 imizuzu engekho ngaphezulu kwe-30.
Le ndlela elula kakhulu futhi esheshayo yekhekhe leshukela sikashukela sohlobo 2.
Ukudla iphayi nokukhanga
, kumele ulandele le nqubo. Sebenzisa ufulawa we-rye kuphela - amagremu angama-90, amaqanda amabili, ukufaka esikhundleni ushukela - amagremu angama-90, ushizi we-cottage - amagremu angama-400 nenani elincane lamantongomane asikiwe. Njengoba izindlela zokupheka zesifo sikashukela sohlobo 2 zisho, konke lokhu kufanele kuvuswe, faka inhlama ekhasini lokubhaka elishisayo, bese uhlobisa ingaphezulu ngezithelo - ama-apula angafakiwe kanye namajikijolo.
Kwabanesifo sikashukela, kubaluleke kakhulu ukuthi umkhiqizo ubhakwe kuhhavini ekushiseni kwama-degree angama-180 kuya kwangama-200.
Ukuze ulungiselele umqulu wezithelo okhethekile, ozokwakhelwa ngqo abanesifo sikashukela, kuzoba nesidingo, njengoba izindlela zokupheka, ezingxenyeni ezifana:
i-rye kafulawa - izingilazi ezintathu,
Ama-millilititha ayi-150-250 we-kefir (ngokuya ngamanani),
imajarini - amagremu angama-200,
usawoti inani elincane
uhhafu wethisipuni likasawoti, ngaphambili owacishwa isipuni esisodwa sikaviniga.
Ngemuva kokulungisa zonke izithako zohlobo lwesifo sikashukela 2, kufanele ulungiselele inhlama ekhethekile ezodinga ukusongwe ngefilimu emfishane bese ibekwa esiqandisini ihora elilodwa. Ngenkathi inhlama isesiqandisini, uzodinga ukulungiselela ukugcwaliswa okulungele abanesifo sikashukela: usebenzisa iprosesa yokudla, usike ama-apula amahlanu kuya kwayisithupha angenakuthengwa, inani elilinganayo lamaplamu. Uma ufisa, ukungezelelwa kukalamusi kalamula nesinamoni kuvunyelwe, kanye nokufakwa esikhundleni sikashukela okubizwa ngokuthi i-sukarazit.
Ngemuva kokukhwabanisa okwethuliwe, inhlama izodinga ukusongelwa engxenyeni emincane kakhulu, ibolile ukugcwaliswa okukhona bese ikroqeka umqulu owodwa. I-oveni, umkhiqizo ophumelelayo, ifiseleka imizuzu engama-50 ekushiseni kwama-degrees angama-170 kuya kwangama-180.
Ungazisebenzisa kanjani izinto ezibhakiwe
Impela, ama-khekhe ethulwa lapha nakho konke ukupheka kuphephile ngokuphelele kubantu abanesifo sikashukela. Kepha kufanele ukhumbule ukuthi inqubo ethile yokusetshenziswa kwale mikhiqizo kumele ibonwe.
Ngakho-ke, akunconywa ukusebenzisa lonke iphayi noma ikhekhe ngasikhathi sinye: kuyalulekwa ukulidla ngezingxenye ezincane, kaningana ngosuku.
Lapho usebenzisa ukwakheka okusha, kuyalule futhi ukukala isilinganiso se-glucose ngemuva kokusebenzisa. Lokhu kuzokwenza ukuthi ukwazi ukulawula isimo sakho sempilo njalo. Ngakho-ke, ama-pastry ama-diabetes awatholakali kuphela, kepha kungenzeka ukuthi awanambitheki futhi enempilo kuphela, kepha angalungiswa kalula ngezandla zawo ekhaya ngaphandle kokusebenzisa imishini ekhethekile.
Kubhaka ini kuvunyelwe kwabanesifo sikashukela?
Noma onesifo sikashukela, isifiso sokujabulela ama-khekhe asinciphile. Ngemuva kwakho konke, ukubhaka kuhlale kuthokozisa futhi kuyindlela entsha yokupheka, kepha ungayipheka kanjani ukuze ilusizo ekubonisweni kwesifo sikashukela?
Ukudla kwabanesifo sikashukela: yiliphi ibanga okufanele ulikhethe?
Ukuze ufulawa ube lusizo kwisifo sikashukela, kufanele sibe nenkomba ephansi noma ephakathi. Lesi yinkomba ekhombisa izinga lokuqhekeka kwe-glucose egazini elitholwe ngemuva kokudla umkhiqizo kafulawa. Ngakho-ke, usebenzisa kuphela ufulawa wezinhlobonhlobo ezifanayo ekubhaka, ungazihlikihla ngokungagcini ngokunambitha, kodwa nemikhiqizo kafulawa ewusizo.
Yini ufulawa okufanele ngiyenqabe?
Izinhlobo ezahlukene zikafulawa wesifo sikashukela kanye nenkomba yayo ye-glycemic
Minyaka yonke isibalo sabantu abanesifo sikashukela sikhula njalo. Isizathu salokhu ukudla okungalinganiseli nokuphila kokuhlala phansi.
Ngemuva kokuthi umuntu ezwe lokhu kutholwa, into yokuqala efika emqondweni wukudla okuyi-monotonous, okungenawo amaswidi nokunye ukudla okuqukethe ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi.
Kepha lesi sitatimende asithathwa njengeyiqiniso, ngoba akaze kube kudala imithetho nemigomo ephathelene nokudla evunyelwe noma enqatshelwe ukudla nalesi sifo sohlelo lwe-endocrine ibuyekeziwe.
Kuze kube manje, uhlu lwama-dessert, izithelo namajikijolo kunabile impela, into esemqoka ukuthi uqaphele. Ukuhambisana nokwelashwa kokudla kuyiphuzu eliyinhloko ekwelapheni lesi sifo. Okokuqala, udinga ukutadisha uhlu lwemikhiqizo engadliwa yilesi sifo. Le ndatshana iqukethe imininingwane yokuthi yiluphi ufulawa ongaba khona onesifo sikashukela futhi ongasebenzi.
Lokhu kungenxa yokuthi kunengozi yokwanda kokuhlushwa ushukela. Ngenxa yalokhu, kungaba nezinkinga ezinkulu.
Umhlaba wazi izinhlobo eziningi zikafulawa, lapho imikhiqizo ethile ikhiqizelwa khona abantu abanenkinga ye-endocrine. Ngaphezu kwenkomba ye-glycemic, udinga ukunaka inani lamandla womkhiqizo.
Njengoba abantu abaningi bazi, ukuphuza amakhalori ngokweqile kungasongela ukukhuluphala, okufaka ingozi enkulu kubantu abanalesi sifo. Ngayo, ufulawa onenkomba ephansi ye-glycemic kufanele usetshenziswe, ukuze ungazimbi kakhulu lesi sifo. Kufanele kukhunjulwe ukuthi okuningi kuncike ezinhlotsheni zomkhiqizo - ukunambitheka nekhwalithi yokubhaka .ads-mob-1
Ngezansi kwenkomba ye-glycemic yezinhlobo ezahlukahlukene zikafulawa:
i-buckwheat - 50,
ubhontshisi - 50,
Zonke lezi zinhlobo ezingenhla zivunyelwe ukusetshenziswa njalo lapho kulungiswa okwenziwe ngamehlo okujabulisa ukwedlula zonke.
Kulezi zinhlobo, kunqatshelwe ngokuphelele ukupheka izitsha:
ummbila - 70,
ibhali - 60,
ilayisi - 70.
Inkomba ye-glycemic ye-Oatmeal iphansi, okwenza ibe yindlela yokuphekela ephephe kunazo zonke. Inokwakheka kwayo into ekhethekile esehlisa amazinga kashukela. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ukhulula umzimba wamafutha amabi angafuneki.
Ngaphandle kwenani elikhulu lezinzuzo, umkhiqizo oats oats unokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwekhalori. Amagremu ayikhulu alo mkhiqizo odumile aqukethe cishe ama-369 kcal. Kungakho lapho ulungiselela izimpahla ezibhakiwe noma ezinye izitsha ezivela kuwo, kunconywa ukuhlanganisa oats nolunye uhlobo olufanele lwefulawa.
Ukuba khona njalo kwalo mkhiqizo ekudleni kwansuku zonke, ukubonakaliswa kwezifo zomgudu wokugaya ukudla kuyancishiswa, ukuqunjelwa kuncishiswe, kuthi kuthathwe isilinganiso esisodwa se-hormone yokwenziwa kwama-pancreas, umuntu ayidingayo impilo ejwayelekile. Umkhiqizo oats oats ubandakanya inani elikhulu lamaminerali, njenge-magnesium, potassium, selenium.
Kuphinde kusekelwe kumavithamini A, B₁, B₂, B₃, B₆, K, E, PP. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi lo mkhiqizo uvunyelwe ukusetshenziswa ngisho nalabo bantu abasanda kohlinzwa kakhulu. Ngokuqondene ne-buckwheat, inokuqukethwe okuphakeme okufanayo kwekhalori. Cishe amagremu ayikhulu omkhiqizo aqukethe i-353 kcal.
Ufulawa we-Buckwheat ucebile ngamavithamini, amaminerali kanye nezinto ezithile zokulandela umkhondo:
Amavithamini e-B akuthinta kahle ukusebenza kohlelo lwezinzwa lomuntu, ngenxa yalokho ukuqwasha kususwe, futhi ukukhathazeka nakho kuyanyamalala,
I-nicotinic acid ithuthukisa kakhulu ukuhamba kwegazi futhi iqede ngokuphelele ukuba khona kwe-cholesterol eyingozi,
i-iron ivimbela i-anemia
futhi isusa ubuthi nemithi esindayo,
ithusi ekwakhiweni ithuthukisa ukumelana komzimba ezifweni ezithile ezithathelwanayo namagciwane we-pathogenic,
I-manganese isiza indlala yegilo, futhi ibuye yenze kube noshukela egazini plasma,
i-zinc inomphumela onenzuzo esimweni sezipikili nezinwele,
I-folic acid iyadingeka ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba kuvimbela ukukhubazeka ekukhuleni kwesibeletho.
Ngeshwa, ukubhaka kusuka kulolu hlobo lwefulawa akuvunyelwe kubantu abane-carbohydrate metabolism engasebenzi kahle.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi inkomba ye-glycemic kafulawa we-corn iphezulu kakhulu, futhi okuqukethwe kwekhalori komkhiqizo kungama-331 kcal.
Uma ukugula kuqhubeka ngaphandle kwezinkinga ezibonakalayo, khona-ke ochwepheshe bayakuvumela ukuthi uyisebenzisele ukupheka izitsha ezahlukahlukene. Konke lokhu kungachazwa kalula: Ummbila uqukethe amavithamini namaminerali amaningi angenakubalwa ongeke enze eminye imikhiqizo yokudla.
Ufulawa wombila wesifo sikashukela sohlobo 2 ngenxa yokuqukethwe yi-fiber kuyo, uyakwazi ukwehlisa ukuqunjelwa futhi uthuthukise ukusebenza kohlelo lokugaya kwabantu. Enye imfanelo esemqoka yalo mkhiqizo ukuthi ngisho nangemva kokulashwa okushisa ayilahlekelwa yimpahla yayo enenzuzo.
Kepha, ngaphandle kwalokhu, kuyenqatshelwe ngokuphelele kubantu abaphethwe yizifo ezithile zesisu nezinso. Ilusizo olukhulu ngenxa yokuqukethwe kwamavithamini we-B, i-fiber, kanye nama-microelements akulo.
Inkomba ye-glycemic kafulawa we-amaranth ingu-45. Ngaphezu kwalokho, kubhekwa njenge-gluten-free.
Enye into ehlukile kulo mkhiqizo ukuthi iqukethe inani elikhulu lamaprotheni ekwakhiweni kwalo, elibonakaliswa yikhwalithi enhle kakhulu.
Futhi iqukethe i-lysine, potassium, phosphorus, fatty acids ne-tocotrientol. Kuyaziwa ukuvikela ngokuntuleka kwe-insulin.
Inkomba yefulawa yefilaksi yefilakisi iphansi impela, kanye ne-rye.
Ukubhaka kohlobo lokuqala lwefulawa kuvunyelwe kubantu abanesifo sikashukela, kanye nalabo abanamaphawundi awengeziwe.
Ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwefayibha ekwakhiweni kwayo, ukusebenza kahle kwendlela yokugaya esiswini kuthuthukiswa kakhulu, ukugaya kuyathuthukiswa futhi nezinkinga zesitofu ziyaqedwa. I-rye kafulawa yesifo sikashukela isetshenziswa kakhulu ekwenzeni isinkwa nokunye ukubhaka.
Kungenzeka yini ukudla ama-pancake wesifo sikashukela? Ungakwazi, uma kuphekwe kahle. Ukwenza ama-pancake glycemic index aphansi, sebenzisa iresiphi kule vidiyo:
Ngokuya ngezincomo zama-endocrinologists kanye nokusetshenziswa okulinganiselayo kwezinhlobo ezithile zikafulawa ovunyelwe, umzimba ngeke ulinyazwe. Kubaluleke kakhulu ukungafaki ngokuphelele ekudleni kokudla okuqukethe inkomba ephezulu ye-glycemic futhi ikakhulukazi i-caloric.
Zingathathelwa indawo ngokudla okufanayo, okungekho ingozi ngokuphelele futhi kuqukethe inani elikhulu lezakhi zomzimba, ngaphandle kwalo ukusebenza komzimba akunakwenzeka. Kuyalulekwa ukuthi ubonisane nabezempilo abazokwenza ukudla okufanele.
Imikhiqizo yeflure nefulawa imvunyelwe kungavunyelwe ekudleni okusebenzayo, kepha nokho ezinye izinhlobo zingadliwa ngaphandle kokulimaza isibalo. Kunezimpuphu ezintathu zokugaya: emihle, ephakathi nendawo nehlanganisiwe (ufulawa wokusanhlamvu wonke)
Ukugaya okuhle akukukhuthazi ukuthi usebenzise i-diabetes kanye nokudla ngokunciphisa umzimba, ngoba kuyindlela eshesha kunazo zonke yokufakwa emzimbeni.
Ukugaya okuphakathi kungasetjenziswa ekudleni ngamanani alinganiselwe.
Ukugaya ama-coarse kufanele kwenziwe iningi lemikhiqizo edliwayo ye-carbohydrate, kuboniswa abantu abanesifo sikashukela nalabo abafuna ukubeka impilo nomzimba wabo ngokuhlelekile.
Izinga eliphakeme kakhulu likafulawa liyingozi kakhulu kulesi sibalo, kodwa okusanhlamvu okuphelele kufanele wonke umuntu (ungathola ibanga kokuphakishwa).
Lezi zibalo ezingezansi ziyizinkomba ezilinganiselwe, ngoba inkomba ye-glycemic incike ezicini eziningi, kumajikijolo nezithelo, ikakhulukazi ezicini zokuhlukahluka, izinga lokuvuthwa. Kuyo yonke imikhiqizo nezitsha, inkomba ye-glycemic ingahluka ngokuya ngohlobo nangesilinganiso sokwelashwa okushisa. Funda kabanzi esihlokweni se-Glycemic Product Index
Ibhali etafuleni lakho linenkomba ye-glycemic engama-70, kepha kweminye imithombo eminingi ingama-22. Kungani kunenkinga engaka futhi imuphi imininingwane eyiqiniso?
Ngokusobala nginephutha, manje ngike ngabheka ukuthi ikubhali lwebhali GI 70. Ngizoyilungisa, ngiyabonga ngokuveza okungahambi kahle.
Kepha akaneminyaka engu-22. Kungani futhi ngubani othathe ibhali le-pearl le-GI elilingana nama-22 angazi, ngokusho kwemithombo ehlukahlukene, ngithole ukuthi lingama-35. Futhi ibhali le-pearl ebilisiwe linenkomba ye-glycemic ka-45.
Ngithole imininingwane lapho inani liqhamuka ku-22. Ibhali licutshungulwa ngokuhlukile, kunezinhlobo zebhali le-pearl ethengiswa eCanada, okusanhlamvu kwalo kuyapolishwa kusuka ngaphandle kuya ku-nacre (yingakho igama elithi pearl), kepha iningi lejazi lembewu lihlala ngaphakathi
Ngokufana ne-popcorn, ijazi lembewu ngokusobala liyinciphisa i-GI. Kungenxa kuphela nokusanhlamvu okuluhlaza. Uma isivele iphekiwe, izokhula kakhulu.
Ezinye izindlela zokwelapha ibhali, ngaphambi kokuphola ibhali le-pearl, ukuthi akukho magobolondo asasele. Ama-GI anjalo aphakeme, kepha ngaphakathi kwe-27-35.
Kunoma ikuphi, ngisho nenkomba ye-45 azwakali njengokusongela njengo-70.)))
Siyabonga ngemininingwane nangempendulo.
Ngivame ukusebenzisa ipuleti le-glycemic index, noma ngingenaso isifo sikashukela, ukube nje bengingafuni ukudla ikakhulukazi ebusuku.
Ngiyalithanda ibhotela lamantongomane - banginike imbiza evela eCanada. Kepha kusho u-55 ngoshukela kanye ne-GI. Futhi uma kungama-40 kuphela ngaphandle koshukela. Ngizoqeda imbiza ngikwenze ku-sahzam.
Inkomba ye-glycemic kafulawa wokusanhlamvu wonke, izinzuzo nokubi.
Ngokusho kwabasebenza ngokudla okunempilo, okuwusizo kakhulu yizinto ezibhakiwe ezenziwe ngofulawa wokusanhlamvu okuphelele. Ukudla okunesifo sikashukela kufanele kususelwe kusinkwa sonke sokusanhlamvu. Inani lefulawa ngokufakwa kwe-bran libonakala emhlabeni wonke. Okusanhlamvu okusobala okusobala kuyizuzisa kakhulu ekulweni nesifo sikashukela nokukhuluphala. Inkomba ye-glycemic kafulawa wokusanhlamvu okuphelele - amayunithi angama-40. Ngokuya ngohlobo, ibanga, indlela yokugaya ingakhuphukela kumayunithi angama-65.
Isinkwa esivela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zikafulawa sizoba nenkomba yaso ye-GI:
35 kwahluma isinkwa sokusanhlamvu
Isinkwa se-buckwheat ephelele - amayunithi angama-40.
Isinkwa se-rye okusanhlamvu - amayunithi angama-40.
Isinkwa se-Wholemeal rye - amayunithi angama-40
Isinkwa semvubelo 100% okusanhlamvu okuphelele - amayunithi angama-40.
Isinkwa esiphelele sokusanhlamvu ngokufakwa kukafulawa kakolweni - amayunithi angama-65.
Isinkwa se-rye enhlanyelwe - amayunithi angama-65.
Isinkwa se-rye kusuka kufulawa we-rye-kakolweni - amayunithi angama-65.
Okusanhlamvu, komhlaba kanye negobolondo kuya esimweni sikafulawa, ngokwesiko kusetshenziswa ekudleni okufanele.
Ukugaya kungahluka. Ukugaya okuhle kubizwa ngokuthi igrit. Ufulawa wamaphephadonga utholakala ngokugaya ama-coarse. Kusetshenziswa izinhlamvu ezinhlobonhlobo ekukhiqizeni. Ukolweni, i-rye, i-oats, uphizi, ibhali kanye ne-buckwheat yikhona okuvame kakhulu. Labo abanamathela ekudleni okuphansi kwe-glycemic kufanele bakhumbule ukuthi isinkwa esisha nesishisayo sizoba ne-GI ephezulu kakhulu.
Okusanhlamvu okugcotshwe nesinkwa
Zonke izinhlobo zezitsha, ezisuselwa kufulawa wokusanhlamvu okuphelele, zilusizo olukhulu kubantu. Inani elidingekayo lama-carbohydrate ayinkimbinkimbi kanye nezinga eliphansi le-GI lenza ufulawa wokusanhlamvu wonke ukhange kubantu abasesimweni sokudla esinempilo.
Njengoba okusanhlamvu kuqhutshwa kancane, ufulawa uqukethe amavithamini namaminerali amaningi. Ukuchoboza ngobumnene kukuvumela ukuthi ukhulise ukugcinwa kwamafayibha, amavithamini E, B. Ukudla okugaya ukudla kanye namagobolondo okusanhlamvu okungekhona ukugaya kuhlanza amathumbu. Kukhona ukuthuthukiswa kokuhamba kwamathumbu, izinqubo ezibekekayo zidlula.
Ungukufakelwa okuvimbela ukumuncwa kwe-cholesterol eyingozi emzimbeni. Ufulawa wokusanhlamvu uwonke ucebe kuma-asidi angahlanganisiwe nasezakhiweni zomkhondo. I-Flour ine-flavour yesinkwa esimnandi, isakhiwo se-denser. Ukudla imikhiqizo ephelele kafulawa wokusanhlamvu kuqinisa imithambo yegazi, izicubu zenhliziyo, futhi kwehlise nomfutho wegazi.
Lapho kukhona izifo ezihambisanayo zepheshana emathunjini, kudingeka ukuqapha lapho kudliwa ufulawa wokusanhlamvu okuphelele. I-mucosa yegastric ingacasulwa izinhlayiya ezincane zegobolondo yokusanhlamvu.
Kwezinye izimo, ngenxa yokuba khona kwe-microflora ethile ebusweni bokusanhlamvu, ibhalansi ye-bacterium yesisu ingaphazamiseka. Khawulela ukusetshenziswa kwezimpuphu zokusanhlamvu okuphelele okubhakiwe kulabo abaphethwe yi-cholecystitis, i-colitis, isilonda sesisu kanye ne-duodenal ulcer.
IGLYCEMIC INDEX - Kukhombisa amandla we-carbohydrate ukukhulisa ushukela wegazi.
Lesi siyinkomba ESIBONAKALAYO, hhayi i-SPEED! Ijubane lizoba elifanayo kuwo wonke umuntu (inani eliphakeme lizoba cishe imizuzu engama-30 kuwo wonke ushukela ne-buckwheat), futhi i-QUANTITY ye-glucose iyohluka.
Ngamafuphi, ukudla okuhlukile kunekhono le-DIFFERENT lokukhulisa amazinga kashukela (amandla e-hyperglycemia), ngakho-ke banenkomba ehlukile ye-glycemic.
I-carbohydrate elula, OKWENGEZIWE KUSUSA izinga likashukela wegazi (i-GI engaphezulu).
Lapho i-carbohydrate eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, i-LOWERER iphakamisa ushukela wegazi (i-GI engaphansi).
Uma umgomo wakho ukunciphisa isisindo, khona-ke kufanele ugweme ukudla okune-GI ephezulu (ezimweni eziningi), kepha ukusetshenziswa kwawo kungenzeka ekudleni, uma, ngokwesibonelo, usebenzisa ukudla kwe-BEACH.
Ungathola noma yimuphi umkhiqizo owuthandayo ngokusesha (ngakwesokudla kwetafula), noma usebenzisa isinqamuleli sekhibhodi i-Ctrl + F, ungavula ibha yokusesha esipheqululini bese ufaka umkhiqizo oyithandayo.
Ibizwa kanjalo ufulawa, obhulwa kanye nemibungu negobolondo. Lapho kukhula ukugaya, kuqukethe okusanhlamvu okuphelele. Ufulawa onjalo ubaluleke kakhulu ngoba unama-fiber amaningi, amavithamini kanye namaminerali. Ihlanza umzimba wobuthi futhi inikeze izinto eziwusizo.
Okusanhlamvu okuphelele kungaba ufulawa kusuka kunoma yiluphi uhlobo lwesitshalo nokusanhlamvu, isibonelo, ilayisi, i-rye, ukolweni noma ummbila. Ngenxa yokwakheka kokuhlanganiswa, ufulawa onjalo unama-kilojoule ambalwa, okusho izinzuzo eziningi. Njengomthetho, okuqukethwe kwekhalori nge-100 g kungama 340 kcal, kuthi i-GI yiyunithi engama-55. Ufulawa onjalo uvame ukusetshenziselwa ukubhaka isinkwa, ama-roll, ophaya, njll.
Lesi sigaba sifaka ufulawa onenkomba ye-glycemic ephezulu - kusuka kumayunithi angama-60. Uma singasetshenziswa, khona-ke ngamanani amancane futhi ndawonye nefulawa, enamanani aphansi we-GI. Uhlobo luni kafulawa okufanele lushiywe kushukela, ungathola ngezansi.
I-GI yakhe amayunithi angama-75. Ufulawa onjalo utholakala ezinhlolweni zamabele okusanhlamvu, ahlanganiswe ngokuphelele nesitashi. Kulesi simo, igobolondo eliwusizo, eliqukethe i-fiber yokudla eyakhiwe, liyasuswa. Ngakho-ke, ufulawa kakolweni ugcwele ama-carbohydrate asheshayo ayingozi, adonswa ngokushesha futhi anda ushukela wegazi, okuyingozi kumuntu onesifo sikashukela.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi noma yimiphi imikhiqizo kafulawa evela kufulawa kakolweni wokuqala omhlophe, ikakhulukazi “othengiwe”, iyahambelana. Lokhu akubandakanyi izimpahla ezibhakiwe kuphela, kepha futhi nepasta, ama-pancake, amadombolo, njll. Ukusetshenziswa kwemikhiqizo enjalo kuzonikeza ukugxuma okuqinile kushukela wegazi.
Uma ufulawa kakolweni usetshenziselwa “ukukhulisa” inhlama enamandla, inani lakhona kufanele lincane, futhi ingxenye eyinhloko kufanele ibe rye, i-buckwheat noma omunye ufulawa onempilo.
Uma sibheka ilayisi le-peeled emhlophe eye yenziwa zonke izinhlobo zokwelashwa ngamakhemikhali, khona-ke akukho lutho olusele ngaphandle kwesitashi. Umkhiqizo onjalo ngeke ulethe usizo kumuntu onempilo, futhi ikakhulukazi kwabanesifo sikashukela. Ufulawa we-GI ovela ezinhlolweni ezinjalo ngamayunithi angama-70.
Okunye ukuthi uma ufulawa wenziwe kusuka elayisi (brown) elinsundu. Lokhu kuzoba ngumkhiqizo wokusanhlamvu wonke. Ufulawa onjalo welayisi uqukethe inani elikhulu lamaprotheni, ama-carbohydrate ajwayelekile namavithamini e-B, asiza ohlelweni lwezinzwa. Unokuqukethwe okuphansi kwe-GI nekhalori ephansi, okumvumela ukuba abe yisimenywa esivamile kumenyu yesifo sikashukela. Kulula ukwenza ufulawa onjalo ngokwakho ngokugaya okusanhlamvu.
Ukunambitheka kokubhaka esikhathini esizayo kuya ngohlobo lwefulawa esetshenzisiwe, ngakho-ke ungahlola usebenzisa izinhlobo ezahlukene. Izibonelo zokupheka ezinesifo sikashukela zingatholakala ngezansi:
Amakhekhe amaRye. Bopha inhlama kusuka ku-spoonful yemvubelo namanzi ashisayo. Ngemuva kokuthi imvubelo isikhulile, engeza ufulawa we-rye, usawoti omncane kanye nozipuni kawoyela we-sunflower. Bopha inhlama bese kukhuphuka amahlandla ambalwa, isikhathi ngasinye kuhlafuna. Hlukanisa imibuthano, engeza ukugcwaliswa, ukucindezela. Njengokugcwaliswa, noma yimiphi imifino engafakiwe, imifino yenyama nenhlanzi kufanelekile.
Buckwheat nesinkwa se-kefir. Bopha inhlama usebenzisa ingilazi ye-kefir ne-nokunye okufana nokolweni okuhlanganiswa nokolweni. Faka i-2 tsp enhlama. imvubelo, 1 tbsp. l uwoyela omnqumo noshukela. Vumela ukusukuma ubeke kuhhavini. Oven ngehora.
Ikhekhe le-Lemon. Sika ulamula ngethanga ube izicucu, ususe imbewu. Bilisa kuze kuthambe bese ugaya nge-blender. Faka i-sweetener (sorbitol, xylitol) ukunambitha. Imbewu ehlukile yelanga eyomile ngokwehlukana epanini elomile. Hlanganisa i-lime puree, imbewu bese ufaka ufulawa kakolweni, oxutshwe ne-2-3 tbsp. l ummbila Bopha inhlama. Ungangeza iqanda noma iqanda leqanda elishayiwe. Faka ifomu. Bhaka.
Ama-pancake e-oatmeal nge-pumpkin puree. Cwecwa ithanga, ususe imbewu, uthathe izingcezu bese upheka (mhlawumbe enoshukela). Bese usula ngesihlungo noma ugaye ku-blender. Ungangeza izinongo eziwusizo - i-turmeric ne-ginger. Gaya ama-Hercules ufulawa, uthele i-kefir noma ubisi olunamafutha amancane (inani elincane) bese uyaluvumela luvuthwe kahle. Faka iqanda, usawoti, i-pumpkin puree ne-sweetener ukunambitha. Ama-pancake ajwayelekile. Bhaka ku-skillet enamathela okungenayo induku ngaphandle kwamafutha.
Ama-soya kafulawa osoya nenyama enoshukela. Faka inhlama eyenziwe ngofulawa we-soy nosawoti namanzi. Vumela ukulala phansi isigamu sehora, Roll futhi usike ama-mugs ama-dumplings. Cwilisa soya wesigamu sehora, bese ukhipha amanzi bese ucindezela uketshezi olwedlulele. Ngokwehlukana, gazinga u-anyanisi, ungangeza izaqathi egayiwe kanye nopelepele we-bell oqoshiwe. Ngemuva kwalokho engeza umkhiqizo we-soy kanye gazinga kuze kuthambe, usawoti kanye nopelepele. Qala amasinki e-soy alungiselelwe ngenhlama nalokhu ukugxusha. Bilisa futhi ubilise.
“Ukupholisa” noma yimuphi ufulawa, i-bran ne-kolweni germ kufanele kufakwe enhlolweni.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, okuthandwa kunikezwa kufulawa wokusanhlamvu noma okuphelele, ngoba kusiza ukwehlisa amazinga kashukela egazi futhi kuthuthukise izinqubo ze-metabolic. Njengoba kunokwehluka okuningi kofulawa onempilo, imikhiqizo ehlukahlukene kafulawa ingalungiswa ngokungeza izinhlobo eziphezulu kumenyu yesifo sikashukela.
Isifo sikashukela kanye ne-glycemic index yokudla
Umsoco yingxenye ebalulekile yendlela yokuphila. I-Dietology isenesikhathi eside iyekile ukuba yingxenye yezokwelapha futhi isuka emaphepheni ezincwadi zesayensi yaya kumamagazini acwebezelayo ngempilo kanye nokudla. Kodwa-ke, ukuze udle ngokweqiniso, kuyadingeka ukuhlola zonke izindlela ezintsha zokudla zesayensi. Isikhombi esaziwa kudala emphakathini wesayensi yinkomba ye-glycemic yemikhiqizo, futhi esisanda kuthola ukubaluleka emkhakheni wezinto zokudla “ezifashini”.
Kubantu abanesifo sikashukela, kuyadingeka ukubheka inkomba ye-glycemic yemikhiqizo (GI), ngoba ukubheka inkomba kuzosiza ukulawula ukugcwala koshukela egazini.
Inkomba incike kwindlela yokwelashwa okushisa nokuqukethwe kwamaprotheni namafutha kumkhiqizo, kanye nohlobo lwe-carbohydrate nenani le-fiber.
Iyini inkomba yokudla kwe-glycemic eqinisweni? IGlycemia - ngokwezwi nezwi ihumusha ngokuthi "ubumnandi egazini" kusuka olimini lwesiLatin. I-GI ikhombisa amandla womkhiqizo wokushintsha i-glucose egazini. Lokhu kuyinkomba yokulinganisa. Izinombolo zayo zikhombisa ukuthi mangaki amagremu kashukela asuka engxenyeni ephelele yama-carbohydrate adonswa umzimba bese engena egazini.
I-100 g yamabele ne-GI yama-70 iqukethe ama-60 g ama-carbohydrate. Kula ma-carbohydrate, azongena egazini: 60 g * 70/100 = 42 g kashukela egazini nge-100 g yamabele (i-GI iyigundile, ngakho-ke kufanele ihlukaniswe yi-100).
I-GI ye-glucose ithathwa njengesibonakaliso se-100. Kukhona imikhiqizo ene-GI engaphezu kwe-100 (ngokwesibonelo, ama-molasses noma kabhiya). Lokhu kungenxa yempahla yomkhiqizo ukuze ihlukanise masinyane ezintweni ezincanyana bese ingena ngokushesha ekusakazweni kwe-systemic.
Kepha okunye ukudla akunawo ama-carbohydrate amaningi. Isibonelo, i-GI yamazambane ebilisiwe ingama-85. Lesi yisilinganiso esiphakeme sesifo sikashukela. Kepha kumagremu ayi-100 amazambane kuphela ama-15 g ama-carbohydrate. Kumazambane ayi-100 uthola konke: 15 g * 85/100 = 12,75 g kashukela. Kungakho ukuqhathanisa okungenangqondo kwama-indices emikhiqizo ehlukile kungakufundisi ngaso sonke isikhathi.
Ngenxa yalokhu, ngaphezu kwe-GI, kukhona enye inkomba ehlobene - umthwalo we-glycemic (GI). Umongo uyefana, kodwa kuthathwa amaphesenti ama-carbohydrate kumkhiqizo. I-GI isetshenziswa kakhulu ngokuhlanganiswa nolwazi lwe-carbohydrate.
Ukuthola ukuthi yikuphi ukudla okudla ngokwejwayelekile kwe-glycemic index kulula ngokwanele. Esiswini esingenalutho udinga ukudla umkhiqizo wokuhlolwa. Inani layo libalwa ukuze liqukethe ngqo ama-50 g wama-carbohydrate. Njalo ngemizuzu engu-15 bathatha igazi likashukela, imininingwane iyaqoshwa. Umphumela otholakala emahoreni amabili uqhathaniswa nenani elifanayo ledatha ye-glucose. Ukuze usungule ngokunembile i-GI, udinga ukuthatha isampula kubantu abaningana bese ubala inani eliphakathi. Ngokwemiphumela yocwaningo nokubala, kuhlanganiswa amatafula enkomba ye-glycemic.
Izinombolo zikuvumela ukuthi uqhathanise imikhiqizo nganoma yisiphi isici, kepha akuhlali kucace ukuthi isikhombi sendawo sinikeza ini ngomqondo ofanele.
Inkomba ye-glycemic ibaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela. Abantu abanesifo sikashukela kufanele bakhethe ngokucophelela umthombo wama-carbohydrate, ngoba isifo sabo sihambisana nesici ekufakwa i-glucose. Ukuze ungaphakamisi izinga likashukela wegazi ngokweqile, udinga ukubala ukuthi mangakhi amagremu kashukela azofika egazini ngokudla okuchithiwe. Ngalezi zinhloso, udinga inkomba ye-glycemic.
I-GI nayo ibalulekile kubantu abaphilile. Inkomba ye-glycemic ayibonisi kuphela inani le-glucose, kodwa futhi nokuphendula okuhambisanayo kwe-insulin. I-insulin ilawula imetabolism ye-glucose, kepha ayithathi noma iyiphi indima ye-biochemical ekuwohlokeni kwayo. Iqondisa ushukela ophukile kumadepho ahlukahlukene omzimba. Enye ingxenye iya ekushintshanisweni kwamanje kwamandla, bese enye ihlehliselwe "kamuva". Ukwazi i-GI yomkhiqizo, ungalawula imetabolism yomzimba, uvikele ukwakheka kwamafutha kumakhrobhothi avela.
Ithebula lamavelu we-Index
Ethebula le-glycemic indices yemikhiqizo yokudla, ungathola idatha elinganiselwa kumikhiqizo. Ukuhluka okulandelayo kuyahlukaniswa:
Phezulu - kusuka ku-70 nangaphezulu.
Okuphakathi - kusuka ku-50 kuye ku-69
Phansi - kuze kufike ku-49.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi, ngokwesibonelo, inkomba ye-glycemic kwimifino kuncike ngenkathi, ukuvuthwa nokuhlukahluka.
Cishe zonke izithelo namajikijolo zicebile kushukela, okwandisa i-GI yazo. Noma kunjalo, kunezithelo ezinenkomba ephansi ye-glycemic. Phakathi kwazo, izithelo zonyaka zibaluleke kakhulu: i-apricot, iplamu, i-apula, i-pearl, i-currant, i-raspberry.
Ngokuphambene, kunezithelo ezinenkomba ye-glycemic ephezulu - ubhanana, amagilebhisi, ikhabe. Kodwa-ke, lokhu akusho ukuthi izithelo zabo ziyingozi. Kuhlala kufanele ukulandisa i-GI ngamaphesenti ama-carbohydrate. Ngakho-ke, amakhabe ane-GI ephakeme kahle, kepha i-100 g yesipuni sayo iqukethe ama-carbohydrate ayi-5.8 g kuphela.
→ Kungani kulimaza ukwehlisa isisindo masisha,
→ Izeluleko eziyishumi zalabo abafuna ukunciphisa umzimba masisha,
→ Ukudla kwemenyu yezinsuku eziyi-7,
→ Ukudla isonto lonke kusuka kwaPupa Wilson.
→ Imithetho eyisisekelo yokusekela isisu ngethoni,
→ Imithetho emihlanu yesishayamthetho esiyisicaba,
→ Ukudla okufanele kwesisu esisicaba,
→ Ukuzivocavoca abezindaba,
→ Ukudla okwenziwe ngomsoco ngesikhathi sokushintsha kwama-hormone.
→ Izici eziwusizo zikaviniga,
→ Ukubuyekezwa mayelana nokunciphisa isisindo,
→ Iresiphi yeviniga,
→ Kanjani nokuthi uphuze kangakanani,
→ Ukudla kwezinsuku ezintathu.
→ Usawoti noma hhayi usawoti,
→ Ukudla ngaphandle kosawoti,
→ Ukudla imenyu,
→ Ukujwayela kanjani ukudla ngaphandle kosawoti,
→ Izinganekwane mayelana nendlela yokuqeda i-cellulite,
→ Ukudla kwe-cellulite,
→ Imenyu yosuku,
→ Ukupheka kanjani ukudla,
→ Amakhambi asekhaya we-cellulite.
→ Izindawo ezivame kakhulu ukwanda kwesikhumba,
→ Okufanele ukwenze uma isikhumba sesivele sesixolile,
→ Izindlela ezi-5 eziphambili zokuqinisa isikhumba se-saggy
→ Ukudla okufanele kokuqina kwesikhumba,
→ Imodi yokuphuza.
UDanilova, uNatal Andreyevna Isifo sikashukela: imithetho yokugcina impilo ephelele / UDanilova Natalya Andreevna. - M: Vector, 2013 .-- 676 ​​c.
UVladislav, uVladimirovich Privolnev Diabetesic unyawo / uVladislav Vladimirovich Privolnev, uValery Stepanovich Zabrosaev und Nikolai Vasilevich Danilenkov. - M: I-LAP I-Lambert Academic Publishing, 2016 .-- 570 c.
I-Chernysh, i-theory ka-Pavel Glucocorticoid-metabolic yohlobo 2 sikashukela mellitus / Pavel Chernysh. - M: I-LAP Lambert Academic Publishing, 2014 .-- 820 k.